Synephrine vovoka (94-07-5) hplc≥98% | AASraw varo-dratsy
/ Products / Vokatry ny vinaingitra / Synephrine vovoka
5.00 avy amin'ny 5 miankina amin'ny 1 mpanjifa Rating
SKU: 94-07-5. Sokajy: Vokatry ny vinaingitra
Ny AASraw dia miaraka amin'ny synthesis sy ny fahaiza-manao manomboka amin'ny gram amin'ny filahatry ny pneumonie synephrine (94-07-5), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Lahatsary vovoka synephrine
Synaphrine roja fototra karazana fototra
Formula Molecular: C9H13NO2
Meny fitetezana 167.21
Color: Fotsy fotsy na fotsy fotsy
Ny vovony Synephrine roah amin'ny tsingerim-panafody steroides
Ny vovobony synephrine dia alkaloid voajanahary voajanahary izay heverina fa tsy mihetsika sy tsy mitongilana noho ny fiantraikany amin'ny fahaverezan'ny lozam-pifamoivoizana sy ny tsindrona kognitika ao amin'ny atidoha. Natao tamin'ny zavamaniry sy biby sasany ny sirindrana synephrine, indrindra fa ny ankamaroan'ny Synephrine vovoka hita amin'ny fampidiran-tsakafo dia nesorina sy notsongaina avy amin'ny Citrus Aurantium Plant izay fantatra matetika amin'ny fitrandrahana Bitter Orange.
Fampiasana vovoka Synephrine
Mba hisarihana ny vovobony amin'ny metabolika sy angovo avy amin'ny vovobony synephrine, tsara ny zavatra voalohany amin'ny maraina na 15 - 30 minitra talohan'ny fampiharana. Ny fampiofanana mialoha sy ny fitsaboana fatiantoka misy tsiranoka Synephrine dia tokony horaisina miaraka amin'ny rano alohan'ny fampiharana. Ny doka mahomby indrindra dia 15 - 25 milligrams ho an'ny fanompoana.
Inona avy ny karazana vokatra tokony hofinihiko amin'ny vovony Synephrine Rano
Tahaka ny fanafody voajanahary rehetra, aza manantena loatra ny fiandrasana amin'ny vovony Synephrine.
Tadidio fa ny fanafody dia tsy manamboatra fitsaboana lehibe. Fanoloran-tena amin'ny fiofanana sy ny sakafo mahavelona.
Izany hoe, izao no azonao antenaina amin'ny famenoana ny pneumonie Synephrine:
Fampitomboana kely ny tahan'ny metabolika.
Mihena kely ny asan'ny sela mpitsabo sela izay manakana ny fanetsiketsehana matavy.
Mihabetsaka ny fiantraikan'ny fihinanana sakafo, na ny 'vidin'ny angovo' amin'ny sakafo metabolizing.
Raha tsy manamarika izany sexy izany aminao izany, azoko. Miantso azy io fotsiny aho.
Izany dia midika fa tsy midika izany fa tsy tokony hampiarahana amin'ny syneprhine ianao. Midika fotsiny izany fa tsy tokony hampiana afa-tsy amin'ny vovony Synephrine raha te-hahita ny fanatsarana ianao.
Toy izany ihany koa ny momba ny fanampiana voajanahary hafa.
Amin'ny tenany samirery, dia tsy misy dikany. Alao sary an-tsaina ny valiny.
Ohatra, raha miaraka volo Synephrine miaraka amin'ny naringin sy hesperidin ianao, dia azonao ampitomboina ny fiovan'ny metabolika. Ary raha manampy kafeinina ianao, dia vao mainka miharihary ny vokany.
Raha mikasika ny tena fahaverezan'ny fatotra, raha raisinao ireto fanampiana efatra isan'andro (ary indrindra alohan'ny hamoahana azy), dia azo ekena ny mihevitra bebe kokoa ny fihenan-tsakafo hafa isan-kerinandro amin'ny 0.5.
Ary ampy ho an'ny resaka izany raha toa ianao ka manofana mafy sy mihinana tsara.
(Tokony hilaza aho fa afaka manary tavy matavy be loatra ianao, na dia haingana kokoa aza rehefa manampy nyhimbine ao anatin'ilay mix.)
Fampitandremana momba ny vovony Synephrine Rano
Ankoatra ny fahaizana manakana ny fialan-tsasatra, ny vovobony synephrine dia manaporofo fa tsy afaka ny handoro ny tavy mihitsy. Noho izany, tsy azo lazaina ho fatin-tsakafo matavy ny vovony synephrine. Amin'ny fandraisanao ny vovony Synephrine miaraka amin'ny menaka matavy, dia hahatsapa ianao fa tsy halaim-panahy hikirakira mandritra ny androm-piainanao raha mbola hijanona ela kokoa ianao ary manana faniriana haingana hihinana mihoatra ny fitaovanao isan'andro.
Satria fotsiny ny fanampiana amin'ny tsena dia tsy midika fa tokony horaisinao izany. Mbola mitohy ny fitsapana ny vinaingitra synephrine ary ny vokatra sasantsasany dia mampiseho fa rehefa levona dia mety hisy vokany hafa, toy ny aretim-po, fihinanan-kibo ary fahatsapana tsinay. Tsara ihany koa ny mampitandrina fa ny poezia Synephrine dia heverina fa mampandrosoana, fa ireo izay manana na mety ateraky ny fiakaran'ny tosi-drà, dia manana tantaram-pianakaviana amin'ny aretim-pon'ny aretim-po na efa nokasihiny mihitsy aza, mba tsy hisakanana an'io vokatra io Mety hitarika ho amin'ny fitomboan'ny risika izany satria mihena ny tahan'ny fo kely.
Koa, ny fanontaniana fototra, tokony hitondra ny Syneprhine ve ianao? Raha ny marina, raha tsy mampiasa an'io ianao amin'ny fihanaky ny aretin'ny hoditry ny hoditra, tsy hitako ny antony mahatonga ny olona iray handevina an'io fanafody io. Raha toa ianao ka tsy voatery handefitra mpitsabo iray haka ny synpehrine, dia mialà eo fotsiny, satria ny loza mety hitranga dia avo loatra amin'ny fiheverana ny valisoa azony omena anao. Na dia tsy azoko lazaina aminao aza izay tokony tokony hataonao ary tsy tokony horaisiko, mino aho fa amin'ny fisintonana ity vokatra ity raha tsy ampianarina anao koa ianao, dia mety hiafara amin'ny fitondran-tena ratsy kokoa noho ny tsara ianao.
Raha mitady valiny ianao amin'ny Internet, dia hahita fampitandremana mampangetaheta ianao fa mety hampitombo ny alahelonao amin'ny fiakaran'ny tosidra, ny aretim-pivalanana, ny aretim-po, ny tsindry, ary ny 'fiantraikany hafa.'
Eny, maromaro ny fanadihadiana no manaporofo fa tsy mampitombo ny tsiranoka ny tsindrona synephrine, ary ny fikarohana dia mampiseho fa amin'ny ankapobeny dia azo antoka sy mandefitra tsara.
Ny zava-misy dia raha toa ianao ka toy ny ankamaroan'ny olona, ​​tsy ho hitanao be loatra rehefa mandray ny vovony Synephrine Ny ankamaroan'ny tatitra dia mampitombo ny herin'ny hery amin'ny tsy fisian'ny fitsaboana amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny (jitters, moules, foza haingana, etc. ).
Izany dia, raha manana toe-pahasalamana ianao na mandray fanafody izay mety hanohitra ny fiterahana amin'ny vinaingitra Synephrine, diniho ny dokotera alohan'ny fampiasanao, mazava ho azy. Ireo ohatra dia ny tosidra ambony, ny mpanohitra ary ny VIH / SIDA.
Ny vovobony synephrine, na fantatra araka ny mahazatra, Bitter Orange, dia zavamaniry iray izay mamokatra ny ravina, ny voankazo ary ny voankazo ary ampiasaina hanaovana fanafody ary ny felany dia ampiasaina mba hahazoana menaka. Ny menaka misy menaka mangidy dia azo ampiharina amin'ny hoditra mba hanampy amin'ny fitsaboana aretina, toy ny valala sy atleta tongotra.
Na dia mbola maro aza ny fikarohana, dia misy ihany koa porofo mampiseho fa rehefa misy olona iray mandany ranom-biriky mangidy dia azony atao ny manafoana ny fiankinan-doha. Ao no misy ny tsimok'aretin'ny Synephrine mampiseho ny fahavoan'ny lanjany eo amin'ny mpampiasa satria izy io dia mamorona vokatra maharitra eo amin'ny vatana mba hahatonga ny mpanjifa hahatsiaro ho ela kokoa ary hampihena ny fakam-panahy ho an'ny faniriana na ny faniriana handevonana sakafo fanampiny. Amin'ny fihinanana sakafo tsy dia ilaina loatra no handevonana tsiroaroa, ka izany dia miteraka lanjany mandritra ny fe-potoana.
Rovam-panafody mivolom-bary synephrine
Ahoana ny fividianana vovoka Synephrine avy any AASraw
1. Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny mailaka fanadihadiana mailaka, na solontenan'ny mpanjifa amin'ny aterineto skype (CSR).
Synephrine Raw Powder Recipes:
Manampy ny tsy fahampian-tsakafo ve ny vovony synephrine?
Vokatry ny vinaingitra (14)
Nandrolone Phenylpropionate (NPP) vovoka
Stanozolol / Winstrol / winny poids
AC 262356 vovoka